Portal:Dhul - Wikipedia
laga soo sawiray Apollo 17
7.155° ilaa dhul-bareha qoraxda
Loolasha u yaryihiin
1 dayax oo dabiici ah (Dayaxa),
Dhulka (, ) waa meereha sadexaad ee qoraxda u dhow ee Bahda Midaysay Qoraxdu. Waa meeraha ugu muga iyo miisaanka weeyn iyo midka shanaad ee ugu xajmiga weeyn sideedda meere eeBahda Qoraxdu Midaysay. Dhulka waxa lagu naaneeysaa Meeraha Midabka Buluugan sababtoo ah marka hawoda sare laga soo fiirinayo waxa muuqda midabka buluuga. Dhulku waa meereha kaliya ee nolol ka jirto dhamaan meereyaasha aan naqaano. Waxa lagu qiyaasaa meeraha dhulka in da'diisu ku dhowdahay 4.5 bilyan oo sanno. Dhulka isku-wareegiisa (Circumference) waa 40,007.86 km marka laga xisaabayo dhul badheha, sidoo kale baaxada guud ee oogada dhulku waa 510,072,000 km2 - taas oo ka kooban 148,940,000 km2 dhul ama caro iyo dhagax ah una dhiganta 29.2 %; iyo 361,132,000 km2 biyo iyo bad ah, taas oo u dhiganta 70.8 % Muga dhulku waa 1.08321 ×10 12 km3 halka cufka meeraha dhulku yahay 5.97219 ×10 24 kg. Sidoo kale, miisaanka cuf ee dhulku waa 5.515 g/cm3, halka cufisjiidadka dhul badhehu yahay 9.780327 m/s2 taas oo u dhiganta 0.99732 g. Cadaadiska dunidan waa 101.325 kPa (MSL). Heerkulka oogada sare ee dhulku waa meel dhexaad taas oo ah mida taageertay in nolol ka jirto meerehan. Kulka iyo qaboowga dhulku wuu kala duwan yahay ayadoo Cidhifyada (polars) oogu heerkul hooseeyo taas ka dhigtey qaboow badan, laakiin meelaha ku beegan dhul badheha ayaa ugu heerkul sareeya dunida. Guud ahaan, heerkulka dunidu marka ugu hooseeyo wuxuu gaadhaa 184 K ama −89.2 °C, dhex-dhexaad markuu yahay heerkulku waa 15 °C ama 288 K, marka uu ugu sareeyo kuleeylku wuxuu gaadhaa 56.7 °C ama 330 K.
Cirka ama Samoda sare ee dunidan aan ku nool nahay waxay ka sameeysan tahay 78.08% curiyeha nitrojiin (N) taas oo ah hawo, 20.95% ogsajiin (O), 0.93% argon, 0.039% Kaarboon-labo-ogsaadh (C2O) iyo qiyaastii 1% uumi biyo ah (in kastoo mararka qaar kala duwan tahay cimilodu). Meeraha dhulku wuxuu sameeyaa labo wareeg: mid uu ku wareego xariijintiisa taas oo loo yaqaano Sidereal rotation period oo ku qaadata wakhti dhan 23 saacadood, 56 daqiiqo iyo 4.100 ilbiriqsi taas oo ku dhow 24 saacadood oo ah habeen iyo maalin. Wareega labaad dhulku wuxuu ku sameeyaa qoraxda waxaanay ku qaadataa 365.25744 maalmood oo ah wakhti dhan hal sanad. Taariikhda dhulku aad ayay u dheer tahay oo waxaa la sheegaa in dhulku sameeysmay 4.5 bilyan oo sano ka hor. Isla mar ahaantaana sii jiri doono 8 ilaa 10 bilysan sanno oo soo socota. Sida eey isku raaceen khubarada cilmiga sayniska iyo Cilmi Fallagu, meereha dhulka waxa uu sameeysmay 4.5 bilyan oo sano ka hor, taas oo halkii bilyan ee ugu horeeyay dhexdiisa nolol ka bilaabantey. Isla wakhtiyadaas ayay sameeysantey Oogo Cir ama (atmosphere) kaas oo difaac u ah nolosha dunida kana difaacda ileyska halista ah ee qoraxdu soo deeyso (solar radiation). In ka badan 71% oo dunida ah waa biyoha dhanaan ee badaha iyo harooyinka biyoha macaan ee laga helo oogada dhulka. Inta soo hadhay oo ah 29% waa qaaradaha iyo dhulka caadiga ah. Cidhifyada aduunka, Cidhifka Koonfureed iyo Cidhifka Waqooyi dhamaantoodba waa baraf waana meelaha ugu qabowga badan ee heerkulkoodu aad u hooseeyo. Cufisjiidadka dunida waxay xidhiidh is-dhexgal oo isku xidhan la leedahay meereyaasha kale, gaar ahaan dayaxa iyo qoraxda taas oo suurto-gelisay in miisanka dhulku dheeli tirnaado.
Xuquuqda sawirka: lama yaqaano
Calanka Maalinta Dhulka
Portal:Dhul/Maqaal xul ah/5
Barack Xuseen Obama (US i/ˈrɑːk huːˈseɪn oʊˈbɑːmə/; ; ; wuxuu dhashay Ogosto 4, 1961) waa siyaasi isla markaana aha madaxweynihii 44 ee dalka Mareykanka , iyo qofkii ugu horreeyey ee Afrikan Ameerikan ah ee xilkaas qabta wuxuu ku dhashay Honolulu jasiiradaha Hawaii. Obama wuxuu ka qalin jabiyey jaamacadda Columbia University iyo dugsiga garsoorka jaamacadda harvard Harvard Law School, halkaasuu kasoo noqday madaxa Harvard Law Review. Barack Obama waa nin dhalinyar ah oo aad u xargo badan ahna madaxweyna USA dadiisuna waa 47 jir. Waxa uu ku dhashay gobolka Hawaii bishii Juli 27 teedii, Sanadkii 1961 dii. waxaa iska dhalay Aabe dadka madow ah oo ka yimid wadaka Kenya iyo hooyo dadka cadaanka ah oo ka soo jeeda Gobolka Kansas ee wadanka Maraykanka Isaga iyo Afadiisa Michelle Obama, waxa ay leeyihiin laba gabdhood oo la kala yiraahdo Malia iyo Sasha. Aabbihii waxa uu ka tagay isaga oo laba sano jir ah si uu waxbarashadiisa uga sii wato jaamacada Harvard. Kaddibna waxa uu dib ugu laabtay dhulkii uu ka yimid ee Kenya. Aabbiihiis kadib, Senator Obama hooyadii waxa ay guursatay nin ka yimid waddanka Indonesia. kadibna waxay u guureen wadankaasi oo ay ku noolayeen intii u dhaxaysay sanadihii 1969 kii ilaa 1971dii. Obama, markii uu dib ugu soo laabtay gobolka Hawaii ee ay hooyadii ku noqotay Indanusia, waxa uu halkaasi kula noolaa waalidiintii hooyadii dhashay ee cadaanka ahaa. Buugga uu taariikh nololeedkikiisa ku qoray ee la yiraahdo Dreams of My father. Himilooyinkii Aabahay, waxa uu ku sheegay in uu isticmaalay Daroogo, marki uu yaraa ee uu ku korayay Hawai. Waxa uu wax ku bartay sadex jaamacadood oo ay ku jiraan Jaamacadaha Colombia iyo Harvad. Takhasuskiisi ugu danbeeyayna waxa uu ahaa culuunta sharciyada.
Muuqaalka Meeraha Dhulka; kani waa sawirgacmeed uu sameeyay farshaxan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Dhul&oldid=171012"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2017, marka ee eheed 15:51.